Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Fahasalamàna
Pejy 2 amin_ny 68
Tantara mikasika ny Fahasalamàna
Indostria02 Jolay 2020
Ekoatora25 Jona 2020
Afrika Mainty23 Jona 2020
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Jona 2020
Heverin'ny ministera misahana ny fizahantany fa mbola azo avotana ny taompiasana. Somary ho hafa kely aloha ny tsirony.
Fihibohana henjana ho an'ny faran'ny herinandro tao Azerbaidjana, taorian'ny fitomboan'ny tranga COVID-19
Azia Afovoany sy Kaokazy19 Jona 2020
Arakaraky ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 ao amin'ny firenena ato anatin'ny andro hoavy, mbola azo sainina ny hisian'ny faran'ny herinandro hafa hanaovana fihibohana.
Setrin'ny fanentanana mandrisika ny mponin'i Wuhan mba haneho fankasitrahana ny lehiben'ny Antoko Komonista amin'ny ady amin'ny COVID-19
Azia Atsinanana19 Jona 2020
Tsy manana hery hitomaniana akory izy ireo kanefa misy olona miteny azy ireo ankehitriny mba hianatra mahay misaotra. Manohitra ny maha olona izany.
Afrika Mainty17 Jona 2020
Afrika Mainty13 Jona 2020
Mpampihanaka COVID-19 malaky sy ny “andavanandro vaovao” indoneziana
Azia Atsinanana12 Jona 2020
Fihaonana ara-pivavahana iray tamin'ny volana marsa no ahiana ho niteraka ny fianahan'ny viriosy tany amin'ny faritany miisa 22, hoy ny manampahefana ara-pahasalamana.